Izizathu ezi-4 zokuba kutheni ubona u-3: 33-Intsingiselo yama-333
Ngaba ubone nje u-3: 33 ngelixa, ngakumbi emva kokuthandaza okanye ukucamngca, okanye uyakhumbula ubona i-333 ephupheni? Ngenye indlela, ngaba ama-333 avela emva kokusweleka komntu omthandayo? Yiba nokholo kuloo nto Usikelelwe ngengqondo yokulandela imiqondiso engama-333 uMdali oMkhulu ayibeke phambi kwakho . Ngenyaniso, uyathemba ukuba ukhokelwe nguThixo apha ukuze ufumane malunga neentsingiselo ezingama-333 kwaye ufumanise ukuba kutheni inombolo kathathu engu-333 ibonisa umendo wakho ngeli xesha ebomini bakho. OUkuba ugqiba lo myalezo, uya kusiqonda isizathu sokuba uqhubeke ubona ama-333 kuyo yonke indawo, kwaye uya kusebenzisa olu lwazi njengelitye lokunyathela ukukukhokela kwindlela yakho eya phambili.
Unolwazi olunzulu lokuba indalo iphela inxibelelana nawe ngeempawu zobuthixo, kwaye le miqondiso isebenza njengezikhokelo zohambo lwakho lobomi. Eminye yale miqondiso ibonakala njengophindaphindayo enamanani ama-3 okanye iipateni zamanani anemivo emi-4 kuba amanani anokutsala umdla wakho ngokulula kwaye akuvuse ukuze ubone inyani yokuba ungubani nendawo yakho kulomhlaba.
Njengomnxeba wokuvuka ngokubanzi, ukubona ama-333 (okanye ama-3333) ngokuphindaphindiweyo ngumqondiso ovela kubakhuseli bakho abangcwele-iingelosi-ezazenziwe nguThixo ukukukhokela ngalo lonke ixesha lokuphila kwakho emhlabeni. Kwindawo yomoya, ukwanazo nezikhokelo zomoya ezibonisa ngexesha elithile lobomi bakho ukukunceda kuhambo lwakho. Gcina ukhumbula, izikhokelo zomoya nazo zinokuba ngabathandekayo abangasekhoyo abakunye nawe ecaleni kwakho. Ngokudibeneyo, iingelosi zakho kunye nezikhokelo zomoya zithumela imiqondiso engama-333 ukuya Ndithuthuzele kwaye ndikukhumbuze ukuba unamandla angaphakathi okuqhubeka nendlela yakho .
Hlala uqinisekile ukuba lo myalezo ungama-333 uvela kwizinto ezikhanyayo eziphezulu, kwaye balapha ukukuxelela ukuba ukhuselekile ngokupheleleyo, uyathandwa, kwaye usendleleni elungileyo. Unomphefumlo ukwazi oko uhlala ukhuselwa ngandlela zonke . Kufuneka ukhumbule ukuba uMdali omnye kunye neqela lakho lokomoya leengelosi kunye nezikhokelo zomoya zilapha kunye nawe-ngoku.
Ke, intsingiselo yama-333 kukuba ufumana i umyalezo wengelosi wenkuthazo, Kwaye uyakhunjuzwa ukuba zonke izinto zinokwenzeka ngokuzingisa nokuba nesimo sengqondo esihle. Nokuba usandul 'ukubuyela umva emsebenzini wakho, ujongene nemicimbi yobudlelwane, ujongene nemicimbi yezempilo, okanye uziva ungenathemba, uyakhumbula ukuba ungalitshintsha ilizwe ohlala kulo ngokutshintsha indlela ocinga ngayo.
Ngokukodwa, xa ucinga ngezisombululo (endaweni yeengxaki), uya kutsala izimvo kunye namathuba azakuzisa izisombululo kubomi bakho bemihla ngemihla. Ngale nto uyayiqonda, uyaqonda ukuba ukubeka onke amandla akho ekucingeni okuhle kuya kutyhila amathuba asikelelweyo kwindlela yakho eya kuthi izuze ukukhula kwakho kunye nokukhula kwabanye abakungqongileyo. Kwaye kunye, niya kuqhubeka nokuvela ngokulandelelana kobomi kunye noluntu lonke.
Ngaphezulu kwako konke, ukubona ukulandelelana kwamanani angama-333 ukuphindaphinda kunokukuzisela eminye imiyalezo, kananjalo kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngama-333 oko kuthetha ukuthini kuwe. Ukuqala, nazi iintsingiselo ezi-4 zokomoya ezingama-333 kunye nezizathu zokuba uqhubeke ubona ingelosi inombolo 333 kuyo yonke indawo, ixesha kunye nexesha.
Intsingiselo yokuqala yama-333: iiMasters ezinyukileyo zikukhokhela ukuba uqhubele phambili
Inani eli-3 eliphindaphindwe kathathu lithetha ukuba ukhuselekile kwaye ujikelezwe yinkosi enye okanye nangaphezulu eyakhe yahamba ebusweni bomhlaba. Inani elingcwele I-333 ihlala ibonisa emva komthandazo okanye ukucamngca ukukwazisa okoiinkosi eziphakanyisiweyozinawe, kwaye zilapha ukukukhokela ebomini bakho ngeli xesha lithile.
Iinkosi ezinyusiweyo ziziqu eziphakamileyo zobuthixo, kwaye xa ubona ama-333 ngokuphindaphindiweyo, Uyaqinisekiswa kuba beve xa ufuna uncedo .Ngolu lwazi, uqala ukukhumbula ukuba esi sesona sizathu sokuba uqhubeke ubona ama-333 kuyo yonke indawo, kwaye unokholo olongezelelekileyo lokuba uyakufumana uncedo lwabo ngeendlela ezahlukeneyo.
Zininzi iinkosi ezinyukayo kwaye ubulumko bazo buza ngeendlela ezininzi. Ukusuka kuThixo, uMthombo weNdalo, ezinye zezona zidumileyoiinkosi zokomoya zeplanethi yakhoNguYesu, uBuddha, iSaint Germain, uMoses, uQuan Yin, uLao-Tzu kunye noYogananda.
Kule meko, intsingiselo engama-333 kukuba ezi zikhokelo zomoya ezivela kwiindawo eziphakamileyo zikukhokele kwindlela yakho onke amanyathelo endlela, kwaye Uyacelwa ukuba ufumane amandla akho ngaphakathi, ukuzimisela kunye nesibindi ukuqhubeka ngendlela ekhokelela kwinyaniso yakho.
Uyaqonda ukuba indlela entsha ye Ukufumana inyani yakho luhambo oluza kukhula ngokwendalo kunye nohambo lwakho oluya kwihlabathi . Xa ukhangela intsingiselo yokuba ungubani nendawo yakho kweli hlabathi, uyakhumbula ukuba unomphefumlo, kwaye ubambe intlantsi yoMdali oNgcwele ngaphakathi kwakho. Uyaqonda ukuba unomdla wendalo wokwazi yonke into, kuba Ukulangazelela kwakho ulwazi kuvela kwiminqweno yakho yokuba njengoMdali owazi yonke into .
Endleleni yakho yokufumanisa kunye ne-333 njengesikhokelo sikaThixo, uza kuguqula ngaphakathi kwakho okuqinisayo. Uvumela uMoya oyiNgcwele ukuba ukhule ngaphakathi kwakho ngokwenza uthando lwazo zonke izinto eziphilayo, ngokuphila ubomi obunyanisekileyo, ngokuba nobubele, nangokunceda abanye abantu ngeyona ndlela ungcono ngayo. Njengoko uvumela ubuThixo ukuba bande ngakumbi ngaphakathi kwakho, ufumanisa ukuba ngokwendalo utyhalela ngaphandle i-ego yakho-ubuxoki. Nini uyaqonda ukuba akukho gumbi le-ego okanye lobuxoki bokuhlala ngaphakathi kwakho , uqala ukuphila ubomi obunolwazi oluphezulu ngokomoya. Oku kuthetha ukuba uyazi ngakumbi ukuba ungubani kanye kanye. Kwaye ngokulula, uyafana noKristu okanye uBuddha.
Ngolu lwazi uyakuqonda oko Ulwazi lufumaneka kuwe, kuba luhleli kuwe . Imele isiQinisekiso sakho seNyaniso, kwaye bubukho boMdali ngaphakathi kwakho. Ekugqibeleni, ukufunda ngesiQinisekiso sakho kuya kukuqhubela phambili, kwaye ekugqibeleni, yindlela yokwazi uMdali wakho kunye nendlela elungiselela kwaye ikukhokelele kwinqanaba elilandelayo kwinkqubela phambili yobomi bakho.
Lilonke, isizathu sokuba uqhubeke ubona ingelosi inombolo ye-333 ivela phambi kwakho kukuba uxhaswe nguThixo kuhambo lwakho lokubuyela kuMdali. Okukhona umazi uMdali wakho, kokukhona uya kucinga njengoMdali, kwaye ekugqibeleni, uyakuqonda ukuba yintoningokwenenekuthetha ukuba banye noMdali.
Ukumanyana noMdali kukwazi ngokwakho.
Intsingiselo yesi-2 yama-333: Sebenzisa amandla aKho aNdalo kwaye ubonise ubuChule bakho
Ukubona i-333 sisikhumbuzo esivela kuThixo sokuba uMthombo weNdalo iphela, nguMdali oMkhulu. Ngenxa yokuba uvela kuMdali weNdalo iphela, Ukuyila kuyinxalenye yendaleko yokomoya . Amandla akho okudala sisipho esikelelekileyo, kwaye xa usenza ukuphucula ubuhle bobomi, yindlela yokomoya yokuzibonakalisa kwakho kunye nokubonisa ubuThixo ngaphakathi kwakho.
Kolu khanyiso, xa ubona ama-333 rhoqo, intsingiselo kukuveza umnqweno wokuyila ngaphakathi kwakho. Kwaye ngokubonisa umlilo wokuyila ngaphakathi kwakho, uye ube nguthixo ngakumbi njengoko usenza ngakumbi ebomini bakho. Ukuba nobuchule kukusondeza kuMthombo weNdalo iphela, kwaye xa ubomi bakho bonke buba nobuchule, uhlala ekuhambeni kwamandla kaThixo.
Uyaqonda ukuba yonke into kubukho bakho, njengebhalbhu yesibane, yayiyeyona ngcamango okanye ingcinga eyacingwa ngumntu omnye. Xa uphupha kwaye usebenzisa umbono wakho ukuba nombono wendalo yakho, ufumana amandla angabonakaliyo okomoya eza kuwe evela kuMdali oyiNgcwele. Oku amandla omoya angabonakaliyo eza kuwe njengempembelelo .
Gcina engqondweni, igama eliphefumlelweyo livela kwigama lesiLatini elithi 'inspirare' elithetha 'ukuphefumla' okanye 'ukungenisa.' Ke, ngalo lonke ixesha ufumana inkuthazo, 'uphefumlela' amandla oMdali emzimbeni wakho, kwaye 'umoya oyiNgcwele ungaphakathi kuwe.' Ngesi sizathu, xa ukhuthazeka, uyaqonda ukuba ukunxibelelana 'emoyeni' noMdali yindlela ofumana ngayo ukuphuphuma kweepiphanies kunye nemibono yokuphila ubomi bokuyila. Kwaye ngenkqubo yokuyila, uguqula izimvo kunye neengcinga ezivela kumbono wakho ube yinyani yakho ebonakalayo.
Njengomdali wamava akho, ukhanyisa ukungcangcazela okunamandla okutsala abantu abathile ebomini bakho abanokukunceda wenze umbono wakho. Nokuba unomnqweno womphefumlo wokubhala, ukupeyinta, ukucula, ukudanisa, okanye ukwakha into emangalisayo, uyabuthanda ubomi xa usenza nawuphi na umsebenzi ngovuyo nangothando ngokusuka entliziyweni yakho. Kwaye khumbula, bonke ubuchule obuvela entliziyweni yakho yinxalenye yokuhamba kukaThixo.
Xa ama-333 avela kuThixo ebomini bakho, khumbula ukuthembela kubuchule bakho bokuzalwa ukuze wenze nantoni na ekukhuthazayo. Unokuqonda ngokupheleleyo oko Ukuphila ubomi bakho emhlabeni yinto yakho yobugcisa yobugcisa, kwaye kuyimbonakalo yoyilo lwesicwangciso sobomi bomntu . Uyakhumbula ukuba xa udala, uyila kunye noThixo kwaye uphucula ubuhle bobomi ngeziphiwo onazo. Yiyo loo nto esi sizathu sokuba uqhubeke nokubona i-333, kwaye ikwayesona sizathu sokuba u-333 akufune.
Ekugqibeleni, ukuveza ubuchule bakho bokuyila yindlela yakho eyonwabisayo yokudibana nokubetha kwendalo kwindalo iphela, kwaye ekugqibeleni, yindlela yokufunda ukuba ucinga ukucinga njengoThixo- kwaye ekugqibeleni, ube njengoThixo.
Intsingiselo yesi-3 yama-333: Yiba nesibindi sokuBonisa iNyaniso yoMphefumlo wakho
Ukubona ama-333 ngokuphindaphindiweyo luphawu lokuthetha inyani yakho ngokubonisa ubuqu bakho. Umhlaba wonke ukukhokela ukuba usebenzise ilizwi lakho ukubonisa iimvakalelo zakho okanye ubeke iimvakalelo zakho kumagama anika amandla ahambelana nomphefumlo wakho. Ngolu lwazi, uyakuqonda ukubaluleka kokuziva ukhuselekile kwaye ukhululekile ngendlela okhetha ukuyichaza inyani yakho ukuze abanye bazive kwaye baqonde umbono wakho. Kwinqanaba lakho, sele uyazi indlela yokwabelana ngenyaniso yakho ngendlela esebenza ngcono kuwe. Kwifom yomlomo okanye ebhaliweyo, kuxa uveza inyaniso yakho uxhasa umphefumlo wakho kwaye utyhile owokwenene.
Nangona kunjalo, xa ungayichazi inyani yakho, ubulumko bomzimba wakho buya kukuxelela ukuba awuhambelani nesiqobo sakho. Xa oku kusenzeka, iimvakalelo zokungonwabi ziya kuvela, kwaye lo luphawu lokukwazisa ukuba awuthembekanga kwaye ungcatsha umphefumlo wakho. Umzekelo, ukuziva ucaphukile kungangumqondiso wokuba awuyichazi inyani yakho xa usithi 'ewe' ukwenza into, kodwa enyanisweni umphefumlo wakho uyakukhuthaza ukuba uthi 'hayi.' Ngesi sizathu, intsingiselo ye-333 kukumamela umzimba wakho, uqaphele iimvakalelo zakho, kwaye uchaze inyani yakho ukuze ekugqibeleni ubuyise amandla akho.
Ukongeza, ukuba ukhe wehlelwa ngumothuko obangele ukuba uthule xa ufuna ukuthetha phandle kwaye ufumane uncedo, ukubona i-333 luphawu lokufumana amandla kunye nokukhulula uloyiko olwalubambe emqaleni wakho ukuze unike amandla kwilizwi lakho. kwaye ubonakalise ngenkalipho inyaniso yakho.
Rhoqo, uyakufumanisa oko Ukuchaza inyaniso yakho kunokubangela umzuzwana wesityhilelo esikhulu esinokukuphilisa . Kwaye xa wabelana ngenyaniso yakho nabanye, inokubaphilisa kakhulu, nabo.
Njengokuba abantu bemveli babelana ngamabali malunga nembali kunye nenkcubeko yabo kwizizukulwana ngezizukulwana, wabelana ngebali lakho elikhuthazayo lokunceda ukuzisa abantu ekuhlaleni ukuba bafunde kunye. Kolu nxibelelwano lomntu, xa ubona i-333, intsingiselo kukuthetha malunga nokubalulekileyo kuwe kwaye wabelane ngenyaniso yakho, ukuze ukwazikhuthaza isenzo sokutshintshaindlela ophila ngayo nendlela abanye abaphila ngayo, nayo. Yindlela yokuqalisa incoko, kwaye ekugqibeleni, yindlela yokwenza utshintsho kwihlabathi lakho. Okuninzi koku, Onke amabali anikwe amandla ekwabelwana ngawo lithuba lokwenza umntu azive ukuba akayedwa kuhambo lwabo lomntu .
Khumbula, ubomi buhlala butshintsha, ke konke onokukwenza ngoku kukuhambelana nomphefumlo wakho kwaye ubonakalise ukuzithemba kwakho xa uziva ukhokelwa kumzuzu olungileyo. Uqala ukuqonda ukuba kuthatha isibindi ukuphakama uthethe inyani yakho, kwaye uyaqonda ukuba kuthatha isibindi esifanayo ukuhlala phantsi umamele. Lilonke uyayiqonda loo nto Ukuchaza inyani yakho kukwazi ukuba leliphi ixesha elifanelekileyo lokwabelana .
Ngalo lonke ixesha uthetha ngokunyanisekileyo, ubanga ilungelo lakho lokuhlonitshwa. Lilungelo lakho lobuzibulo. Uyilelwe ukuba ubonakalise njengangokuya wawungumntwana. Kwaye ucinga ntoni? Lo mntwana uhlala kuwe kwaye ufuna ukuviwa, kwakhona. Ke, xa ubona i-333 iphindaphindeka, themba ukuba i-Universe ikukhuthaza ukuba uphume uye kudlala!
Ongasekhoyo uMaya Angelou, imbongi yaseMelika, uthe ngokugqwesileyo: 'Akukho buhlungu bukhulu kunokubalisa ibali elingaxelwanga ngaphakathi kuwe.'
Intsingiselo yesi-4 yama-333: Guqula uBomi baKho bube nguMdlalo
Ukubona i-333 sisikhumbuzo esivela kwindalo iphela ukuba uthathe ixesha lokondla umphefumlo wakho ngokuphila ubomi bakho ngendlela eyonwabisayo kunye nokudlalayo. Ukudlala yinxalenye ebalulekileyo yamava akho oluntu. Uyakhumbula ukuba wenziwa ngokomzimba womntu ngeDNA yokomoya yoMdali omnye, kwaye uphethe iLangatye loMdali elingaphakathi kwakho. Ngale nto inzulu yokwazi ukuba uyimbonakalo yoMdali ongumntu, uqala ukuqonda ukuba akukho lantlukwano phakathi kokomoya nokuba ngumntu. Xa uphila njengomntu, uyinyani ngokwasemoyeni. Kwaye ngenxa yokuba umntu okomoya, ukudlala yinto yokomoya .
Njengoko inani lama-333 likhokela indlela yakho, uqala ukukhumbula ukuba ukudlala yinxalenye emnandi yobomi bakho. Xa udlala, uyakhululeka. Ekuzonwabiseni (nokuba kukuphumla, ukubhadula kwengqondo, okanye ukonwabela into oyithandayo), ingqondo yakho ngokwendalo iyadibana namandla kaThixo oMdali omnye. Xa ukwindawo ekhululekile kwaye usazi indawo ekungqongileyo, ingqondo yakho ivulekele ngakumbi kwizimvo, amandla akho okucinga ayanyuka, unxibelelwano lwakho lokomoya lomelele, kwaye uyakwazi ukufumana inkuthazo kunye nokhokelo oluvela kuMdali. Kwaye, kokukhona uphumla ngokunzulu, kokukhona unokuva uMdali ngaphakathi kwakho.
Ngale nkokhelo yobuthixo, intsingiselo ye-333 kukuzinika imvume yokonwabela ngokupheleleyo izinto ezikwenza wonwabe ngokwenyani ukuba uphila ngalo mzuzu-ngoku. Imisebenzi yolonwabo iyatyetyisa ngokomoya kuba ivuselela umphefumlo wakho ukuba wenze ulonwabo ngakumbi kubukho bakho bobuntu. Ukonwaba kukukhuthaza ukuba ukhululeke kwindlela yakho yesiqhelo ukuze wenze ubomi obonwabisayo obugcwele ukuhleka nabantu abakungqongileyo.
Khawukhumbule nje, ebomini, 'i-ego yakho enzulu' ikholelwa ukuba ungumntu ozimeleyo nohlukileyo, kodwa umphefumlo wakho owonwabileyo ngokwendalo uyazi ukuba uyinxalenye yoMdali Omkhulu. Ke, xa uhleka kwaye wonwabile, i-ego yakho ngokwendalo iyawa kude ngalo mzuzu, kwaye umphefumlo wakho uyavuka - kulapho umdlalo kunye nokomoya kudibana khona. Yiyo loo nto ukudlala yenye yeendlela zokukunceda ungene kwimeko yokomoya yokonwaba ngokwenene ebomini kulo mzuzu.
Ngale nto yokuqonda ukonwabela okwenyani umzuzu wangoku, uqala ukuqonda ukuba intsingiselo yama-333 kukwamkela ukuhamba kobomi. Ngale ndlela, ufunda indlela yokuyeka ulawulo kwaye uvumele izinto zenzeke endaweni yokunyanzela ukuba zenzeke. Kungumsebenzi wokomoya ukukunceda ukhumbule ukuba uza kulunga nokuba imeko ithini na kuwe. Xa uvumela i-Universe ukuba ithathe indawo, uyamthemba uMdali ukuba akubonise indlela ebhetele yezinye izisombululo ezisendleleni yakho .
Ke, xa ubona ama-333 ephindaphindwayo, luphawu oluvela kuThixo lokuba uyaqinisekiswa ukuba ukhuselekile kwaye ukhuselekile, kwaye yonke into ihamba ngendlela yakho. Njengokuba umntwana efumana amandla kunye nokukhuseleka 'kunina,' nawe unokufumana amandla kunye nokukhuseleka xa uthembela kwaye unokholo kuMdali oyiNgcwele . Ukuthemba nokuba nokholo kuthetha ukuba nento elula njengomntwana ukwazi ukuba uMdali uyakukhathalela. Ke, beka ithemba lakho kuThixo. Ukuba ngumntwana nokudlala kuthetha ukuba uvule kwaye uqonde ukuba uThixo uhlala ekulungele ukukunceda kwindlela yakho.
Uninzi lwazo zonke, icandelo elibalulekileyo ebomini bakho limalunga namava ohambo lwakho, hayi indawo ekuyiwa kuyo. Isitshixo kuhambo lwakho kubandakanya ukuguqula ubomi bakho bube ngumdlalo kunye nokuhleka ngaphandle kokukhathazeka malunga nexesha elidlulileyo okanye elizayo . Ngolu lwazi lomphefumlo, uqala ukuqonda ukuba wenzelwe ukuba uphile ubomi bakho ngovuyo ngelixa udlala kwaye uhleka ngalo mzuzu wangoku.
Khumbula, Indalo iphela yoMdali yindawo yakho yokudlala, kwaye uyakhunjuzwa ukuba udlale!
Yintoni omele ukuyenza ngokulandelayo xa uqhubeka nokubona i-333?
Xa uqhubeka ubona inani elingcwele lama-333, intsingiselo yile usendleleni elungileyo , kwaye uyaqonda ukuba ubusoloko ukule ndlela. Kukho amaxesha apho ungakhange uwamkele umendo wakho kwaye uzive ulahlekile kuba ubomi ngelo xesha babungacacanga, kodwa ngela xesha Uqale ukuqonda ukuba iimeko ezithile kufuneka zenzekile 'kuwe kwindlela yakho ukuze ube nethuba lokubona ngokucacileyo ukuba yintoni eyenza umphefumlo wakho wonwabe ngoku .
Xa unokucaca ngakumbi kwiimfuno zakho zomphefumlo, umphefumlo wakho uqala ukukhupha ukungcangcazela okunamandla okuvela kuwe okutsala abantu abafanelekileyo kunye neemeko ezifanelekileyo ukukunceda endleleni yakho. Ngokubalulekileyo, uyaqonda ukuba utsala into oyiyo, hayi le uyinqwenelayo. Ngenxa yokuba umthetho wokutsala uthi 'uthanda ukutsala,' uyayiqonda loo nto utsala abantu ebomini bakho abafana nawe . Oku kuthetha ukuba xa ufunda ukuba ungazinceda njani ukuba uphumelele, uya kutsala abantu abaya kukunceda nawe uphumelele.
Ukuze uphumelele, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukuphindaphinda inani lamanani angama-333 kunokuthetha oko kuya kufuneka uthathe isigqibo esibalulekileyo kwisigaba sakho sobomi esilandelayo. Kwaye nasiphi na isigqibo osenzayo, uyathemba ukuba uxhaswa nguThixo ngandlela zonke.
Esi sigqibo sinokujika sibe yi 999 uhlobo lwamandla , ezisa ukuvalwa kwimeko ethile kwaye ikulungiselele utshintsho kwinqanaba elilandelayo lobomi bakho. Ngenye indlela, esi sigqibo sinokujika sibe yi Ngama-666 uhlobo lwamandla oko kukubongoza ukuba ulungelelanise ngokuqinisekileyo iingcinga zakho kwiinkalo zobudlelwane bakho kunye nobomi bakho basekhaya.
Khumbula, ezona zigqibo zibalaseleyo zihlala zisekwe kwinyaniso yakho, kwaye umphefumlo wakho sele uyazi ukuba wenzeni. Kufuneka umamele oko uziva kukulungele.
Ukhuselekile Onke Amanyathelo Endlela
Kumfanekiso omkhulu, ukubona ama-333 kuthetha ukuba ukhuselekile kuwo onke amanyathelo owathathayo . Uyaqonda ukuba uhlala usiya phambili kwindlela yakho, kwaye uhlala ufumanisa ngakumbi ukuba ungubani kanye kanye. Ufunda ukuba inxenye yokukhula komphefumlo wakho ivela kukungonwabi kunye nobunzima, kwaye amava acela umngeni enzelwe ukukuma ube ngumntu owomeleleyo owawufanele ukuba ubenjalo. Ngenxa yoko, ngawo onke amathuba okufunda owanikiweyo ukuza kuthi ga ngoku, uqala ukuyiqonda loo nto Injongo kunye nesizathu sobukho bakho kukonwabela kwaye ukuxabise ukwanda nokuziphendukela kwemvelo ukuba ungubani kanye kanye , ethi ekugqibeleni idityaniswe nokwanda kunye nokudaleka koluntu.
Gcina ukhumbula, ubomi buhlala butshintsha kwaye buguquka. Kwaye ngenxa yesi sizathu, onke amanqanaba alandelayo obomi bakho aya kufuna uhlobo olutsha nolungcono kuwe . Ke, xa ubona ipateni yamanani aphindaphindiweyo 333, intsingiselo kukukhumbula oko ukhokelwa nguThixo kwaye usikelelwe ngamandla kunye nesibindi sokuqhubeka namandla .
Ngokubanzi, unokholo lokuba yonke into ojolisa kuyo kwaye ubeke ingqalelo yakho ekugqibeleni iya kukhula ibe bubomi bakho. Uyazi ukuba kuya kuhlala kukho izisombululo kuwe, kwaye inombolo 333 ikunceda ukhumbule ukuba i-intuition yakho ihlala ichukunyiswa ukukukhokela kukhetho olungcono. Qiniseka ukuba izisombululo ziya kutyhilwa kuwe ngexesha elifanelekileyo xa kufuneka wenze isigqibo kwisahluko esilandelayo ebomini bakho.
Kwaye ngaphezu kwako konke, nokuba wenza ntoni, unokholo lokuba awuwedwa njengo ukhokelela kwicala elungiselelwe wena kuphela .
AmaKhaya amaKhaya angama-30 Wonke umntu ufanele ukuba abe eneminyaka engama-30
Sebenzisa eli Sheet lokuKopa ukuChonga phantse nayiphi na iNut, Screw, Bolt, okanye Washer
Eyona mibala ipeyintwe yiOfisi, ngokukaBayili bangaphakathi
lithetha ntoni i-113
Iyintoni intsingiselo yokomoya ye-444
ukubaluleka kwe-4: 44